Akụrụngwa na-adịghị edozi ahụ na kichin - Uru ndị dị na ya | Bezzia
Ngwongwo na-enweghị aka na kichin: Uru ndị dị na ya
Susana godoy | | Nri
Ngwongwo na -enweghị aka na kichin bụrịrị 'ihe dị mkpa'. Ọ dị ka oge ọ bụla ndị mmadụ na -akọwa ya nke ọma na nke ahụ pụtara na anyị na -enwekarị ụdị dị mfe nke anyị nwere ike ịtụkwasị obi n'otu akụkụ kacha mkpa n'ụlọ anyị. Youchọrọ ịchọpụta uru niile ha na-enye anyị?
Ọ bụ eziokwu na ndị na-agba ụta ga-eso anyị mgbe niile. Ebe ọ bụ na mgbakwunye na arụmọrụ, ha enyela anyị ọdịdị na mgbanwe mgbanwe na gburugburu ebe obibi. Ma ugbu a, nhọrọ ọzọ abịa nke anyị kwesiri iburu n'uche na nke ahụ siri ike. Ihe ị kwesịrị ị na-atụ uche!
1 Ngwongwo na -enweghị aka na kichin: ịdị mfe karịa
2 Ihe ndozi ga-abụ ihe ịchọ mma
3 Nhicha ya dị mfe
4 Agaghị ejide gị ma ọ bụ kụọ gị ihe!
5 Ejikọtara ha na ụdị ihe ịchọ mma niile
Ngwongwo na -enweghị aka na kichin: ịdị mfe karịa
N'oge na -adịbeghị anya, ịdị mfe dị n'ụdị kichin niile. Gịnị kpatara ụdị minimalist bụ otu n’ime ihe ịga nke ọma ma na-aga n’ihu. Maka nke a, mgbe anyị na -ekwu maka ya, anyị na -ekwukwa maka ịdị mfe, ịma mma na ọkụ. Ị nwere ike nweta ihe a niile na kichin nke gị ekele maka arịa ụlọ enweghị aka. A ga -ejikọ kichin nke ọma, dị ka a ga -asị na ọ bụ arịa ụlọ, n'agbanyeghị na n'ụzọ ezi uche anyị ga -aga n'ihu na -anụ ụtọ akụkụ ya dị iche iche n'ụdị kọbọd.
Ihe ndozi ga-abụ ihe ịchọ mma
Ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ anyị na -eche na ọ bụ naanị mmetụta anya, anyị na -ebu mmetụta ahụ mgbe niile. Ya mere, ekwesịrị ikwu na ọ bụghị kichin niile nwere otu nha ma yabụ, ndị nke pere mpe chọrọ iji ohere kachasị. Anyị achọghị nke a na -akwụghachi ụgwọ, yabụ, arịa ụlọ na -enweghị aka na kichin ga -enye mmetụta nke ohere sara mbara, na -ebugharị obere ka anyị na -ekwu na enwere ohere maka nchekwa kichin gị, nke agaghị abụ obere. Ị ga -ahụ kichin gị dịka ị hụtụbeghị mbụ, n'ihi na ọ bụ eziokwu na ọ bụ mgbanwe mana ọ ka mma.
Nhicha ya dị mfe
N'ezie ọ dịghị mkpa ichetara gị na ọrụ nhicha nwere ike ịdị mgbagwoju anya mgbe niile. Kichin bụ otu n'ime ebe ndị kacha egbu egbu ma ya mere anyị maara mgbe niile banyere nhicha ya. Mana Iji edozi ya nwere ike ịdị mgbagwoju anya, ebe ọ bụ na ndị nwere oghere, zọọ ma ọ bụ ọtụtụ nkọwa nwere ike iwe obere oge. Ebe anyị chọtara arịa ụlọ dị larịị, ihe niile ga -adị mfe. Anyị ga -etinye akwa ma ọ bụ akwa dị mmiri mmiri ma n'otu njem ị ga -enwe ike mechaa ngwa ngwa karịa ka ị tụrụ anya ya. Mfe dị mfe ma anya, mma, na mgbe nhicha.
Agaghị ejide gị ma ọ bụ kụọ gị ihe!
N'ezie enwere ọtụtụ oge mgbe akwa gị jidere aka. Mana na nke a ị gaghị enwe nsogbu n'akụkụ ahụ, n'ihi na ịnweghị ha ma nwee ebe dị nro, ọ nweghị ihe egwu. Ọ bụ otu n'ime nnukwu uru. Dị ka ọnyá ndị ahụ pụtapụtara site na onye na -agba ụta. Ugbu a, anyị agaghịzi enwe nsogbu ahụ n'ihi na ebe ọ na -adịghị, ọ nweghị ihe ga -egbochi anyị ịgafe arịa ụlọ ọ bụla.
Ejikọtara ha na ụdị ihe ịchọ mma niile
Eziokwu bụ na ọ bụ ịke na-agwakọta na niile kwere omume ịchọ mma. Nke ahụ bụ ịsị, n'agbanyeghị na obere ntakịrị ihe o nwere, ị nwere ike imeghari ya ka ọfụma, dịka ọmụmaatụ. Kwesịrị naanị ijikọta agba na imecha. Ngwongwo na-enweghị aka na kichin bụ otu n'ime ihe ndị na-eme ka ike sie ike, yabụ ma ọ bụrụ na ha anọgide na-agafe oge, anyị enweghị ike ịkpọ ha usoro ndị ọzọ. Kedu ka ị kacha amasị ya? Na ndị na -agba ụta ma ọ bụ ikekwe na -enweghị ha?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Home » Nri » Ngwongwo na-enweghị aka na kichin: Uru ndị dị na ya
Summerbọchị Oge Ezumike ahụ, nchịkọta ss21 ọhụrụ nke Oysho
Otu esi etinye ihe eji eme ihe